Indlela yokumboza i-Beat kwi-Journalism
UkuFunda kunye nokuCima iZiko
Uninzi lwabalatheli ababhali nje malunga nantoni na yonke into ephuma kuyo nayiphi na imini. Kunoko, bafaka "ukubetha," oku kuthetha isihloko okanye indawo ethile.
Ukubetha okuqhelekileyo kubandakanya iipops, iinkundla, kunye nebhunga leedolophu. Iinqwelo ezikhethekileyo zingabandakanya iinkalo ezifana nesayensi kunye neteknoloji, imidlalo okanye ishishini. Kwaye ngaphaya kwezi zihloko ezibanzi, abathatheli bavame ukufaka iinkalo ezithile. Ngokomzekelo, intatheli yezorhwebo angabhalela kuphela iinkampani zekhomputha okanye enye inkampani.
Nazi izinto ezine omele uyenze ukugubungela intsimbi ngokufanelekileyo.
Funda yonke into onako
Ukuba ngumlobi wenkohlakalo uthetha ukuba ufuna ukwazi konke onokukwenza ngokubetha kwakho. Oko kuthetha ukuthetha nabantu abasensimini nokufunda amaninzi. Oku kunokuba ngumngeni onzima xa unxiba intsimbi enzima njengokuthi, inzululwazi okanye iyeza.
Musa ukukhathazeka, akukho mntu ulindele ukuba wazi yonke into ugqirha okanye isayensi. Kodwa kufuneka ube nomyalelo oqinileyo womgcini wesifundo ukuze xa udliwano-ndlebe nomntu onjengegqirha ungacela imibuzo eneengqiqo. Kwakhona, xa kufika ixesha lokuba ubhale ibali lakho, ukuqonda kakuhle esi sifundo kuya kwenza kube lula kuwe ukuyiguqulela ukuba wonke umntu aqonde.
Ukuba unxibe intsimbi kufuneka ukwazi abahambahambayo kunye nabangqongqo entsimini. Ngoko ukuba unxibelele amapolisa asekuhlaleni oku kuthetha ukuba uyazi umphathi wamapolisa kunye nabaninzi kwabacuphi kunye namagosa afanayo afanayo njengoko kunokwenzeka.
Ukuba unxibe inkampani ephezulu yenkampani ephezulu ebonisa ukuba udibaniselwano nabaphathi abakhulu kunye nabanye abasebenzi befowuni kunye nefayile.
Yakha Ithemba, Hlakulela Ifowunelwa
Ngaphandle kokwazi nje abantu ekubetheni kwakho, kufuneka uhlakulele izinga lokuthembela okungenani kwezinye zazo ukuya kwinqanaba apho ziba nxu lumano okanye imithombo.
Kutheni oku kuyimfuneko? Ngenxa yokuba imithombo inokukunika iingcebiso kunye nolwazi oluxabisekileyo kumanqaku. Enyanisweni, imithombo ibakho apho abavakalisi beentlanzi beqala xa bekhangela amabali amahle , uhlobo olungenakuvela kumaphephandaba. Enyanisweni, intatheli yentsimbi engenamthombo ifana nombheki ngaphandle kwenhlama; akananto yokusebenza nayo.
Inxalenye enkulu yokuhlakulela oonxibelelwano ichanezela kunye nemithombo yakho. Ngoko cela umphathi wamapolisa ukuba umdlalo wakhe wegalufu uza njani. Tshela i-CEO oyithandayo umzobo eofisini yakhe.
Uze ungalibali amabhalisi kunye nobhala. Ngokuqhelekileyo ngabagcini bemibhalo ebalulekileyo kunye neirekhodi ezinokubaluleka kwamabali akho. Ngoko baxoxe nabo.
Khumbula Abafundi Bakho
Abathathi bamashishini abafaka intlongo iminyaka kwaye bahlakulele umthombo okhuselekileyo wemithombo ngamanye amaxesha bawela emgibeni wokwenza amabali anomdla kwimithombo yawo. Intloko zabo ziye zaxubha ngokubetha kwabo zilibala ukuba ihlabathi elingaphandle libukeka njani.
Oku kusenokuba kakubi ukuba ubhalela umshicileli worhwebo ojoliswe kubasebenzi kwishishini elithile (itsho, i-magazine for analysts). Kodwa ukuba ubhala ngokuprinta ngokubanzi okanye kwi-intanethi ye-newslet njalo khumbula ukuba kufuneka uvelise amabali anomdla kunye nokungenisa kubathengi abaqhelekileyo.
Ngoko xa wenza ujikelezo lwakho, khawuzibuze rhoqo, "Oku kuya kubachaphazela njani abafundi bam? Ngaba baya kunakekela? Ngaba kufuneka banakekele? "Ukuba impendulo ayikho, ithuba lokuba ibali alifanelekanga ixesha lakho.
Iindawo eziNtlontlontlathu zokuQala umsebenzi wakho we-Journalism
Iingcebiso ezi-7 zoPhuculo lweZakhono zakho zokuthetha zikaRhulumente
Umntwana wam unokufumana njani indima kwiNutcracker?
Inkcazo kunye neMimiselo ye-Logical Fallacy
Quotes Florence Nightingale
Iingcamango eziqhelekileyo malunga nobuBomi bobuKristu
Ubudlelwane be-United States neChina
Indlela yokunciphisa kunye nokunciphisa i-Glare ne-Eyestrain
Uluphi umgca weWallace?
Imfazwe Yehlabathi II: I-Ordnance QF 25-Pounder Field Gun
Ukubamba kwiBhola - Inkcazo kunye Nenkcazo
Yintoni iMusic Music?
Igesi elungileyo phantsi koMxinzelelo oPhezulu oyingxaki
Yintoni Ndingayongeza kwiPaint Acrylic ukuze Ndiyikhuphe?